Famoahana didy :: Iharan’ny tsindry hatrany amin’ ny faran-tampony ireo mpitsara • AoRaha
Famoahana didy Iharan’ny tsindry hatrany amin’ ny faran-tampony ireo mpitsara
Voatohintohina amin’ny asany ireo mpitsara. Novakian’Andrianasolo Jacques, minisitry ny Fitsarana, bantsilana ny fisiana fikasan’andian’olom-bitsy sy manampahefana hanohitra ny didim-pitsarana havoakan’ireo rafi-pitsarana eto amintsika.
“Miaro fandrahonana mihitsy izany indraindray. Misy ihany koa ireo karazan’olona manao an’ireo tsindry samihafa hatrany amin’ireo tompon’andraiki-panjakana ambony noho ny tsy fankasitrahany ny didy mivoaka. Hatramin’ireo depiote aza no misy manohitra an’ireny didim-pitsarana ireny”, hoy izy tsy niahotra nandritra ny tafatafa nataony tamin’ny mpanao gazetin’ny “L’Express de Madagascar”, omaly.
Vao tsy ela izay no naharay fitarainana samihafa manodidina an’izany ny minisitra mpitazona ny tombonkasem-panjakana. Notsindriany fa mahaleo tena tanteraka amin’ny famoahana ny didim-pitsarana ireo mpitsara ka tsy handairan’ny fandrahonana na tsindry avy aiza na avy aiza. “Misy ireo mahavita mitety an’ireo andrimpanjakana mihitsy manao an’izay fomba rehetra hahafahana manakana ny fampiharana an’ireny didim-pitsarana ireny. Misy indray ireo andian’olona nanatitra fitarainana any amin’ny birao manokana eny Ambohitsorohitra ka mihevitra hatrany fa manana ny rariny. Misy ihany koa ireo manararao-pahefana ary mihevitra ny hitsabatsabaka amin’ny asan’ny Fitsarana”, araka ny tenin’ny minisitra Randrianasolo Jacques.
Na izany aza, niaiky ny minisitry ny Fitsarana fa mbola betsaka ireo ezaka tokony hatao amin’ny fanadiovana tanteraka ny tontolon’ny asan’ny Fitsarana eto Madagasikara. Tsy mora rahateo ny asan’ireo mpitsara.
“Mbola mitoetra ny tsy fitokisan’ny vahoaka ny Fitsarana hatramin’izao. Tsy tokony hatao ao anatina harona iray avokoa anefa ireo mpitsara izay efa betsaka no manao ny asany am-pahamarinana. Tsy hanaiky lembenana ary tsy mitsitsy amin’ny fandraisana fepetra amin’ireo izay mihoa-pefy anefa izahay. Efa am-polony ireo mpitsara noesorina teo amin’ny toerany”, hoy izy.
Nohamafisin’ity farany ihany koa fa na ireo mpirakidraharaha sy ireo mpiandry fonja aza dia efa voasazy tamin’ny heloka nataony. “Ho an’ireo izay tsy afa-po tamin’ny didim-pitsarana nivoaka dia misy ireo rafi-pitsarana hahafahana mampiakatra ny raharaha. Tsy mino ny tenako hoe misy endrika kolikoly ireny famoahana didim-pitsarana ireny. Mahalala tsara sy manao ny andraikiny ireo mpitsara ireo”, araka ny nomarihan’ny minisitra.
Fiainan-tokantrano :: Mihamahazo vahana ny olana eo amin’ny mpivady